DHAGEYSO Awaamiir lagu soo rogay gaadiidka deegaanada Puntland ka howl gala. – The Voice of Northeastern Kenya
DHAGEYSO Awaamiir lagu soo rogay gaadiidka deegaanada Puntland ka howl gala.
Star FM November 19, 2018
Kualan looga hadlayay amniga Magalada Garoowe ee xarunta maamulka Puntland ayna ka qeyb galeen Maamulka degmada iyo Saraakiisha Ciidamada ayaa waxaa laga soo saaray Amaro dhowr ah oo la doonayo in amniga magaalada Garowe iyo dhamaan deegaanada Puntland lagu sugo.
Kulanka intiisa badan waxaa looga hadlayay arimaha dhinaca Ammaanka maadaama deegaanada maamulka Puntland lagu wado inay doorasha dhawaan ka dahcdo,waxaana laga soo saaray Amaro lagu xakamaynayo gaadiidka noocyadiisa kala duwan.
Taliyaha Ciidanka Booliska ee maamulka Puntland Muxudiin Axmed Muuse ayaa sheegay in 11:00 Habeenimo wixii ka dambeeya aysan socon karin Mootoyinka bajaajta dhamaan deegaanada maamulka Puntland,hadii lagu arkaana lala wareegi doono gabi ahaan gaadiidkaas.
Sidoo kale Gawaarida yaryar ee Tagaasida ah ayuu sheegay inaysan ka sahqayn Karin deegaanad Puntland,iyagoo aan lahayn calaamadaha lagu garto tagaasida.
Ugu danbayntiina masuuliyiinta maamulka Puntladn iyo saraakiisha amaanka ayaa laga dalbaday inay calaamado u yeelana gawaaridooda.
Amarkaan ayaa qayb ka ah dadaalada ammaanka lagu sugayo ayadoo lagu wado inay dhawaan deegaanada maamulka Puntland ka dhacdo doorashada Madaxweynaha Maamulkaas.
← Xuutiyiinta Yemen oo diyaar u ah xabadjoojin dhaqangasho
Musalia Mudavadi oo doonayo in la baaro sida ay siyaasiyiinta ku helaan lacagaha ay ugu deeqaan kaniisadaha →